फ्लकट्याग: युनिभर्सल लोयल्टी सिस्टम र इंटेलिजेंट डिलहरू | Martech Zone
मङ्गलबार, अक्टोबर 1, 2013 मङ्गलबार, अक्टोबर 1, 2013 Douglas Karr
आज दिउँसो म तल मेरो मनपर्ने कफी पसल, भ्रमण गर्न गएँ सर्कल सिटी कफि शप, र फ्लकट्याग त्यहाँ सेटअप पसल थियो!
कुन कुराले मलाई प्रभावित गर्नुभयो दुबै ग्राहक र ब्यापार मालिकका लागि प्रयोग सजिलो। वफादारी कार्ड दर्ता गर्न, FlockTag सेटअप एक माध्यमिक, माउन्ट ट्याब्लेट। ग्राहकले पाठकमा उनीहरूको कार्ड ट्याप गर्दछ र तिनीहरूको ईमेल, पासवर्ड र मोबाइल फोन नम्बर प्रविष्ट गर्दछ र भित्र तिनीहरू जान्छन्।
मैले FlockTag अनुप्रयोग डाउनलोड गरें (आईफोन, Android) र सजिलैसँग सूची वा हाम्रो वरिपरिका अन्य प्रतिष्ठानहरूको नक्सा स्क्यान गर्न सक्दछ जुन तिनीहरूसँग दर्ता गरिएको छ।
फ्लकट्यागको साथ, व्यवसाय मालिकले विशेष ग्राहक मार्फत पाठ मार्फत धक्का दिन पनि सक्छ। मोबाइल अनुप्रयोगले तपाइँको सबै खरिदहरूको ट्र्याक राख्दछ, तपाइँको अर्को डील प्राप्त गर्न मा तपाइँको प्रगति प्रदान गरीरहेको छ। राम्रो सामान!
Twazzup: ट्विटर को लागी वास्तविक समय निगरानी